Faynuuskii Rajada. W/Q Nasra Cali Nuux AwdalMedia Awdal Media Faynuuskii Rajada. W/Q Nasra Cali Nuux
Faynuuskii Rajada. W/Q Nasra Cali Nuux
Dacaska, daasada aan ku fadhiisto iyo dirayska idlaaday ayaa aniga iiga dhignaa qalabka ugu wanaagsan ee qof heli karo. Dugsiga ayaan subax ku kalihi jiray duhurka marka aan soo noqodo hooyo ayaan meherada ay hadhuudh ku iibiso ka reebi jiray. Aniga ayaa hayn jiray ilaa inta ay ka gaadhayso fiidka markaas oo meherad la rafici jiray. Habeenkii markaan guriga ku soo laabto ee aan cashada yar hadba wixii aannu helo afka ku jiidno, dadku hurdo ayey u dareeri jireen anigu se waxaan jecelaa inaan soo jeedo oo aan dersigii maanta raajaco. Hal saac anigoon akhriska wadin ayaa hooyo oo halkan agtayda fadhida oo qudurucsanaysa arkaa. Hooyo in yar baa ii hadhee iska seexo anigaa faynuuska bakhtinee ayaan idhaa. 8 jir ayaan ahay barad aan ku jirnaana waa buul. Waad garan kartaa haddii hurdo i qabto inaan degdeg u gami doono oo aniga oon daareesanayn aan faynuuska gacanta ma lugta ku dhufan karo. Sababtaa ayey hooyo hurada uga dhaaratay intaan soo jeedo ee aan faynuuska kor fadhiyo.
Marar badan waxa dhici jirtay aniga oo bilaabin ka shaqaynta iyo xalinta layliyadii maanta la isoo diray in faynuuskuba dam yidhaa gaas la’aan dartii. Subaxii markaan dugsiga aadaana macallinku yidhaa keena layligii. Kamaan soo shaqayn markaan idhaa isaga oo aan cabashadayda dhagaysan ayuu dhangad dabada ii qabtaa. Habeenka barrito imtixaan la qaadayo weeye markaan hooyo ka codsado in fidhiqo dheerad ah oo gaas ah soo iibiso ama ay casarka iyadu meherada joogto.
Waxaan ka cadhooday in aanu raaci qaanuunkii ahaa inuu ku soo diro Gmailka. Haddii aan furay sawirkii ayaan arkay mise jawaabaha qalin iyo warqad ayaa lagu qoray, mise miisba laguma dul qorine wax ka hoosaysa waa cawo oo warqadu cawda ayey dul saran tahay.Waxa ii caddaadatay in waxa meesha ka jiraa uu ka weyn yahay in gmail la’aan. Waxan ogaaday in ardaygani aanu computer haysan, iska daa computer aanu awooddin inuu waxa ku qorto warqad A4 ah waan sababta uu warqada bayaadka ah oo qiimo ahaan ka riqiisan tan A4ta helitaankeedu ka fudud yahay u adeegsaday.
Noloshu waa taayir/shaag rogmanysa, saraynta iyo hoosayntana saaxiib ayey u tahay oo garanamaysid maalinta dhiishadu hilan tahay iyo maalintaad waxaad dhadhamiso waayeyso.
Rabbi hooyooyinkeenii u halgamay jiritaankeennna raali ha k noqodo.
Meelo badan ayaa fatahaado la soo sheegayaa alle masiibooyinka dadka ha ka badbaadiyo.
Xisbiga Wadani Oo Si Adag Uga Hadlay Xariga Gudoomiyihii Xisbigooda Ee Awdal.
Dowladda Somaliya Oo Diyaarado Gargaar Gaarsiisay Magaalada Qardho.